अब फेसबुकमा लाइभ भिडियो हेर्न पैसा तिर्नुपर्ने ! – CityPokhara | No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Pokhara
सिटी पोखरा डेक्स May 4, 2020 May 4, 2020
फेसबुकमा कुनैपनि प्रयोगकर्ताले राख्ने रेकर्डेड भिडियो तथा लाइभ प्रस्तुतिका भिडियो हेर्नका लागि अहिलेसम्म शुल्क तिर्नु पर्दैन । तर अब निकट भविष्यमै फेसबुक लाइभका भिडियो हेर्नका लागि शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागु हुँदैछ ।
समाचार अनुसार फेसबुकमा अन्य मानिसहरुका लाइभ भिडियो हेर्नका लागि प्रयोगकर्ताहरुले शुल्क तिर्नुपर्ने नियम कम्पनीले छिटै नै लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण जारी लकडाउनका समयमा फेसबुक लाइभमार्फत् आफ्नो प्रस्तुति दिने कलाकारहरुको सहयोगका लागि फेसबुकले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसबाट सर्जक तथा साना व्यवसायीहरुलाई समेत लाभ प्राप्त हुने फेसबुकले जनाएको छ ।
लाइभ भिडियो हेर्न पैसा तिर्नुपर्ने नियम लागू भैसकेपछि फेसबुक लाइभमा आउने कलाकारहरुले अर्थोपार्जन गर्न सक्नेछन् ।
लाइभ भिडियोमा शुल्कको व्यवस्था लागू गर्नका लागि फेसबुकले एक नयाँ फिचर थप गर्नेछ । जसअनुसार फेसबुक लाइभ गर्ने फेसबुक प्रयोगकर्ताले लाइभमा आउनुअघि नै आफ्नो लाइभ भिडियो अरुलाई नि:शुल्क रुपमा देखाउने कि सशुल्क बनाउने भन्ने विकल्प रोज्न सक्नेछन् ।
लकडाउनका कारण घरमै बस्न बाध्य कलाकारहरुले फेसबुक लाइभमार्फत् आफ्नो प्रस्तुति दिएर आर्थिक लाभसमेत प्राप्त गर्न सकुन् भन्नका लागि फेसबुकले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको बताइएको छ । संगीतकार तथा गायक गायिकाहरु, कमेडियन, व्यायाम सिकाउनेहरुका साथै भाषण वा उद्घोषणका क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरु यस नियमबाट लाभान्वित हुनेछन् ।
फेसबुकको यो नयाँ फिचरमार्फत् प्रयोगकर्ताले आफ्नो लाइभ भिडियोबाट आफुले आर्थिक लाभ लिने नभइ कुनै कल्याणकारी कार्यका लागि कोष संकलन गर्न सक्नेछन् । यस्ता प्रयोगकर्ताले आफ्नो लाइभ स्ट्रिममा डोनेट बटन थप गर्न सक्नेछन् ।
फेसबुकले लाइभ भिडियो हेर्न शुल्क तिर्नुपर्ने नियम आगामी केही हप्ताबाटै लागू गर्नसक्ने बताइएको छ । यद्यपि उसले यो नयाँ फिचर सुरु हुने मितिचाहिँ तोकेको छैन ।
स्मरणरहोस्: फेसबुकले आफ्नो गेमिंग सर्भिसका लागि सन् २०१८ मै यस्तो शुल्क तिर्नुपर्ने फिचर ल्याएको थियो । भिडियो गेम खेलाडीहरुका लागि विशेष रुपमा तयार गरिएको उक्त स्ट्रिमिङ प्लाटर्फममा फेसबुक प्रयोगकर्ताले कुनै पनि भिडियो खेलाडीको स्ट्रिममा रकम दान गर्न सक्दछन् । एजेन्सी
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको May 4, 2020 May 4, 2020 1457 Viewed